တောင်အာဖရိက 1 – 1 မက္ကဆီကို Soccer City, Johannesburg
ဥရုဂွေး0–0ပြင်သစ် Cape Town Stadium, Cape Town
တောင်အာဖရိက0–3ဥရုဂွေး Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ပြင်သစ်0–2မက္ကဆီကို Peter Mokaba Stadium, Polokwane
မက္ကဆီကို0– 1 ဥရုဂွေး Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ပြင်သစ် 1 –2တောင်အာဖရိက Free State Stadium, Bloemfontein
တောင်ကိုရီးယား2–0ဂရိ Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
အာဂျင်တီးနား 1 –0နိုင်ဂျီးရီးယား Ellis Park Stadium, Johannesburg
အာဂျင်တီးနား4– 1 တောင်ကိုရီးယား Soccer City, Johannesburg
ဂရိ2– 1 နိုင်ဂျီးရီးယား Free State Stadium, Bloemfontein
နိုင်ဂျီးရီးယား2–2တောင်ကိုရီးယား Moses Mabhida Stadium, Durban
ဂရိ0–2အာဂျင်တီးနား Peter Mokaba Stadium, Polokwane
အင်္ဂလန် 1 – 1 အမေရိကန် Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
အယ်လ်ဂျီးရီးယား0– 1 ဆလိုဗေးနီးယား Peter Mokaba Stadium, Polokwane
ဆလိုဗေးနီးယား2–2အမေရိကန် Ellis Park Stadium, Johannesburg
အင်္ဂလန်0–0အယ်လ်ဂျီးရီးယား Cape Town Stadium, Cape Town
ဆလိုဗေးနီးယား0– 1 အင်္ဂလန် Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
အမေရိကန် 1 –0အယ်လ်ဂျီးရီးယား Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဆားဘီးယား0– 1 ဂါနာ Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဂျာမနီ4–0ဩစတြေးလျ Moses Mabhida Stadium, Durban
ဂျာမနီ0– 1 ဆားဘီးယား Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
ဂါနာ 1 – 1 ဩစတြေးလျ Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ဂါနာ0– 1 ဂျာမနီ Soccer City, Johannesburg
ဩစတြေးလျ2– 1 ဆားဘီးယား Mbombela Stadium, Nelspruit
နယ်သာလန်2–0ဒိန်းမတ် Soccer City, Johannesburg
ဂျပန် 1 –0ကင်မရွန်း Free State Stadium, Bloemfontein
နယ်သာလန် 1 –0ဂျပန် Moses Mabhida Stadium, Durban
ကင်မရွန်း 1 –2ဒိန်းမတ် Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဒိန်းမတ် 1 –3ဂျပန် Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ကင်မရွန်း 1 –2နယ်သာလန် Cape Town Stadium, Cape Town
အီတလီ 1 – 1 ပါရာဂွေး Cape Town Stadium, Cape Town
နယူးဇီလန် 1 – 1 ဆလိုဗက်ကီးယား Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ဆလိုဗက်ကီးယား0–2ပါရာဂွေး Free State Stadium, Bloemfontein
အီတလီ 1 – 1 နယူးဇီလန် Mbombela Stadium, Nelspruit
ဆလိုဗက်ကီးယား3–2အီတလီ Ellis Park Stadium, Johannesburg
ပါရာဂွေး0–0နယူးဇီလန် Peter Mokaba Stadium, Polokwane
အိုင်ဗရီကို့စ်0–0ပေါ်တူဂီ Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
ဘရာဇီး2– 1 မြောက်ကိုရီးယား Ellis Park Stadium, Johannesburg
ဘရာဇီး3– 1 အိုင်ဗရီကို့စ် Soccer City, Johannesburg
ပေါ်တူဂီ7–0မြောက်ကိုရီးယား Cape Town Stadium, Cape Town
ပေါ်တူဂီ0–0ဘရာဇီး Moses Mabhida Stadium, Durban
မြောက်ကိုရီးယား0–3အိုင်ဗရီကို့စ် Mbombela Stadium, Nelspruit
ဟွန်ဒူးရပ်စ်0– 1 ချီလီ Mbombela Stadium, Nelspruit
စပိန်0– 1 ဆွစ်ဇာလန် Moses Mabhida Stadium, Durban
ချီလီ 1 –0ဆွစ်ဇာလန် Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
စပိန်2–0ဟွန်ဒူးရပ်စ် Ellis Park Stadium, Johannesburg
ချီလီ 1 –2စပိန် Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဆွစ်ဇာလန်0–0ဟွန်ဒူးရပ်စ် Free State Stadium, Bloemfontein
ပါရာဂွေး0ဥရုဂွေး 2
စပိန် 1 ဂျာမနီ 3
Donovan 62' (pen.) Report K.P. Boateng 5'
Higuaín 33' Report J.Hernández 71'
ရွှေဘောလုံးဆု - Diego Forlán (ဥရုကွေး)
ရွှေဖိနပ်ဆု - Thomas Müller (ဂျာမနီ)
ရွှေလက်အိပ်ဆု - Iker Casillas (စပိန်)
အကောင်းဆုံး လူငယ် ကစားသမား - Thomas Müller (ဂျာမနီ)
↑ Golden Boot။ FIFA။ 15 June 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 07 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fifa World Cup South Africa 2010 Regulations – Article 39.5 (PDF)။ FIFA (July 2007)။ 26 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Regulations 2010 FIFA World Cup South Africa™ Archived 18 December 2012 at the Wayback Machine. FIFA, 2010
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၀_ဖီဖာ_ကမ္ဘာ့ဖလား&oldid=726138" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။